ကျွန်မမှာ… ရှိတယ်… | Layma's World
Posted on January 13, 2009 by layma
ကျွန်မမှာ… လေးမမှာ… ရှိတယ်…။ မခေါ်ဘဲ ရောက်လာတဲ့ သူတွေ.. ရှိတယ်…။ မတောင်းဘဲ ပေးတဲ့ လက်ဆောင်တွေ ရှိတယ်…။ မကျွေးဘဲ … စားတဲ့ သူတွေ ရှိတယ်…။ 🙂
သူတို့ တွေ … ခေါင်းချင်းရိုက် … လက်ချင်းခတ်… ဒူးချင်းတိုက်ပြီး ကြံစည်ထားကြတယ်…။
သူတို့ တွေ … ဘလော့ဂ် ငါးနေရာမှာ သတင်းတွေ့ ပြီး.. တွေ့ တဲ့ နေရာမှာ ဆုတောင်းပေးသွားကြတယ်…။
သူတို့ တွေ … သတင်းရတာနဲ့စီပုံးကို အပြေးလာပြီး လက်ဆောင်စကားတွေ ဆိုကြတယ်…။
သူတို့ တွေ… ပေးကြတယ်… ပေးသွားကြတယ်… သူတို့ ကို ပစ်ထားတဲ့… ဘာမှ အသိမပေးတဲ့… လေမုန့် လေးတောင် ကျွေးဖော်မရတဲ့… အဲဒီ အမျိုးသမီးကိုလေ… ခင်မင်စွာ… သတိရစွာ… ။ သူတို့ တွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တယ်…။ သူတို့ တွေရှိနေတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခဲ့ရတယ်…။
သူတို့ တွေဆိုတာ …… အမှတ်တရ ပို့ စ်ရေးပေးတဲ့… ဘိုညိမ်း.၊ ဘိုတင့် ၊ မောင်မျိုး.၊ ရွှန်းမီ၊ မွန် …။
သူတို့ ကပြောတယ်.. ကမ္ဘာတုထဲက ကြွက်ဂိုဏ်းချုပ် တဲ့..။
ဒီနေ့ကတော့ ကျနော် တို့ရဲ့ ချစ်လှစွာသော အစ်မကြီးလေးမ ကြွက်ဂိုဏ်းချုပ်ရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ အစ်မရင်းတစ်ယောက်လို လေးစားခင်မင်ဖို့ကောင်းပြီး ပျော်ပျော်နေတက်တဲ့ သူမအတွက် ကျနော်တို့ ညီကိုမောင်နှမတွေက ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင် စုပေါင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဘလော့ပေါ်မှာလည်းတင်ထားပြီး သူမအတွက် ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်လေးတွေနဲ့ စုပေါင်းစပ်ပေါင်းရေးထားတာလေးပါ ။ မလေးမ Happy Birthday 🙂
“ ၀မ်ဆွေ့ ၀မ်ဆွေ့ ၀မ်ဝမ်ဆွေ့”
ဂိုဏ်းသားများမှ ဂိုဏ်းချုပ်သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
ဒုဂိုဏ်းချုပ် (ခ) ကြွက်ကြီးညိမ်းညို
ကျနော်တို့မှာ ကမ္ဘာအတုထဲက အစ်မကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြပါတယ်။
ထူးခြားတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ တွေးဆခံစားရတာကို နှစ်ခြိုက်သူ၊ ဇ၀နဉာဏ်ရွှင်သူ၊ ကိုယ်ပိုင်စာရေးဟန်သီးသန့်ရှိသူ ကျနော်တို့ အစ်မကြီးဟာ
သူ့ရဲ့ ကမ္ဘာတုလေးထဲမှာ သူ့အနုပညာလက်ရာတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ခင်းကျင်းပြသလေ့ ရှိပါတယ်။ ခင်မင်ဖော်ရွှေတတ်သူမို့ အစ်မကြီးရဲ့အိမ်ကလေးဟာ ချစ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနဲ့ အမြဲစည်ကားနေလေ့ ရှိပါတယ်။ အစ်မကြီးက ကွန့်မန့် အရေးကောင်းသူလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကွန့်မန့်ကို ဖတ်ရတဲ့အခါတိုင်း အော်… ငါရေးထားတာလေးကို သေသေချာချာ ဖတ်ပေးသွားတာပါလား ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုး သေချာပေါက် ဖြစ်ပေါ်စေတာပါ။ ပြဿနာများနဲ့ ကြံတွေ့တဲ့အခါတိုင်း အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ အစ်မကြီးရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို အားကျအတုယူမိပါတယ်။
အပြာရောင်ကျောပိုးအိတ်ကလေး၊ သနပ်ခါးပန်းကလေးတွေရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ သူ့ရဲ့ ကောင်းကင်ကြီးကိုလဲ သိုသိုဝှက်ဝှက်ကလေးနဲ့ ကြွားတတ်သူ ဖြစ်ပါတယ် 😛 ဗိသုကာသခင်မတစ်ဦးဟာ ရာဇ၀င်ချင်းရာများကိုလဲ ခြေရာကောက်တတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါကျပြန်တော့ ကဗျာပတ်တီးတွေနဲ့ လောကရဲ့အနာတွေကို ကျပ်စည်းပေးတတ်ပြန်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းသီနွဲ့ ဆိုတေးလဲဖွဲ့တတ်ပြန်ပါရဲ့။
စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့ အစ်မလေးမတစ်ယောက် ချစ်တဲ့ကောင်းကင်ကြီးနဲ့အတူ သားတစ်ရာမြေးတစ်ဖျာရတဲ့အထိ ကိုယ်၊ စိတ်၊ နှလုံး သုံးပါးစလုံး ရွှင်ပြုံးချမ်းမြေ့စွာနဲ့ ဘ၀လမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ အစ်မကြီးအတွက် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ မွေးနေ့မင်္ဂလာလေးဖြစ်ပါစေ 🙂 🙂
အရေးအသားတွေ အချိုးအစားပြေပြစ်တယ် ။
ကမ္ဘာအတုထဲမှာ ကောင်းကင်ကြီးကို ၀ှက်ထားတယ်
ခင်မင်ဖော်ရွေတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ စစ်စစ်တွေကို
တစ်စက်ခြင်းစီ ယိုစိမ့်စေတယ် ။
ပုံတို ပတ်စ သမိုင်းကြောင်းတွေ အစီအရီ ရှိတယ်
နှလုံးသားနဲ့ သီဆိုရတဲ့ သီချင်းတွေ ရှိတယ် ။
ကြွက်ကလေးတွေ တွင်းပိတ်ခံရတယ် ။
အပြာရောင် ကျောပိုးအိပ်တစ်လုံး ရှိတယ်
ဘာဘီနာရီ (၁) လုံးရှိတယ်
ပြတင်းပေါက်နဲ့ ပန်းချီကားတွေ ရှိတယ်
အိပ်မက် ၊ လူသားဘ၀နဲ့ အရောင်တွေ ရှိတယ်
ကျောက်ဆောင် ပင်လယ်နဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်လဲ ရှိသေးတယ် ။
ကုန်တင်ကုန်ချ များတဲ့ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ် ။ ။
မပြုံးပဲမနေနိုင်အောင် အပြန်အလှန် စနောက်ခဲ့ကြတဲ့ နေ့ရက်တွေအတွက်
တစ်လုံး နှစ်လုံး စာစီကုံးဖို့ မလိုဘူးဆိုတာ
ဂေါ်မစွံ ဂီလာန အခွံကြောင်မျိုးလို့ နာမည်လှလှတွေပေးလို့
အာလာဒင် စနှိုးဝှိုက် အကယ်ဒမီ ၅ ထပ်ကွမ်းပေးခဲ့တာတွေကို
ဆွဲဖြည်လိုက်တော့ လက်တမ်းရေးချလိုက်တဲ့ စာကြောင်းတွေက
တီကြွက် အတွက် အမှတ်တရဖြစ်ရင် ကျေနပ်ပြီး
ကြည့်စမ်း ကြည့်စမ်း ဒီကြွက်စုတ် ကိုယ့်အဒေါ်ကို စကားပြောတာက လား?? လား?? လား?? နဲ့ မသိတဲ့သူတွေက ထင်ကြအုံးမယ် အကြွေးတောင်းနေတာလား ရန်ဖြစ်နေတာလားလို့း) ။ ကျနော်က ဒီဘလော့ရပ်ဝန်းကို ခြေမချခင်တည်းက ကြွက်တွင်းပေါက်ထဲကနေ ဘလော့တွေလိုက်လည် မာနကတော့မသေးဘူးရယ် ကိုယ့်ကို စကားပြန်ပြောတဲ့ ဘလော့မှ နောက်နေ့သွားတယ် စကားပြန်မပြောတဲ့သူဆို ပျင်းလို့ ဘာမှမရေးခဲ့ပဲ တိတ်တိတ်လေးပဲ ခိုးဖတ်တော့တယ် ။ ဒါပေမယ့် တီကြွက်တော့ ခြွင်းချက်ပေါ့ ဆီပုံးက ဂျစ်ကန်ကန် ရီပလိုင်းလေးကြောင့် အားတက်ပြီးနောက်နေ့ကစ ခုချိန်ထိ နက်သုံးဖြစ်တိုင်း သူ့ဘလော့ကိုတော့ အမြဲဝင်ဖြစ်တယ်။ စိတ်ကူးလေးတွေကို ပုံဖော်ပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ စာတွေ အမြဲရေးခဲ့သူ ။ စိတ်ညစ်နေတဲ့ အချိန်တောင် သူ့ရဲ့ကော့မန့်လေးတွေကိုဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ်။ကျနော့် ဘလော့လေးမှာ စရေးတဲ့ အချိန်ကစပြီး ဒီနေ့ထိ မပျက်မကွက် မှတ်ချက်လေးတွေပေးနေတဲ့ ပင်တိုင်အားပေးသူ ရဲဘော်ရဲဘက်တစ်ယောက်ပါ ။ ကောင်ကင်ကြီး အကြောင်း ဖော်ကျူးထားတာကလည်း စာဖတ်တဲ့သူတွေကို ကြည်နူးစေတာပါပဲ ( အမှန်ကတော့မသိမသာကြွားတာပါ 😛 )။ ကြွက်ဂိုဏ်းသားတွေဆုံဖြစ်တိုင်း စကားဝိုင်းထဲမှာတော့ ဂိုဏ်းချုပ်က မပါမပြီး ဇတ်လိုက်ကျော်ကြီးပေါ့ ။ အပြာရောင် ကျောပိုးအိတ်ထဲက လူသားလေးတစ်ယောက်အကြောင်းနဲ့ ကျနော်တို့ကို အားတက်စေခဲ့သလို ရန်ကုန်သတင်းပုံစံနဲ့ မျောက်တွေ သန်းရှာပြီး အတင်းတုတ်နေတာတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ ပျော်စေခဲ့သူပါ။ ချောင်းသားက ပြန်လာတော့ မုန့်ဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုပြီး ခရုခွံတွေပဲဝယ်ခဲ့တယ် ။ တီကြွက်ရေ့ လေကြောရှည်တော့ စာတွေကများနေပြီး အောက်ကကြွက်မကလည်း ၁၀ ကြောင်းဆိုပြီးရေးထားလိုက်တာ ပို့စ်တစ်ပုဒ်တောင်ပြည့်တော့မယ် သားကြွက်ပြောမှာတွေ သူကပြောသွားပြီး အဲ့တော့ကား တိုတိုနဲ့တုတ်တုတ်ပဲ ပြောတော့မယ် မွေးနေ့မှာ အရမ်းအရမ်းကိုပျော်ပြီး ကောင်းကင်ကြီးနဲ့ ပိုပိုတိုးလို့ချစ်နိုင်ပါစေဗျာ ပြီးတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသားမီးမီး လေးတွေလည်း ၂ ဒါဇင်လောက် နဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစု လေးကို အမြန်ပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။ အယ်……………မေ့တော့မလို့ တီကြွက်က လေးမဆိုတာ ကမ္ဘာတုမှာပဲရှိတယ်ဆိုပေမယ့် သားကြွက်တို့မောင်နှမတွေအားလုံးက ကမ္ဘာစစ်မှာလည်း ခင်မင်ခွင့် ရချင်ပါကြောင်း အသံတိတ်ပြောချင်ပါတယ် 🙂
မွေးနေ့လက်ဆောင် ကောင်းကင်ကြီးဆီက အနမ်းလက်ဆောင်တောင်းနေတယ် ရှက်လည်းရှက်ဘူး 😛
“ကမ္ဘာအတုထဲမှာ နေထိုင်တဲ့ တိမ်စိုင်ငယ်ဟာ သူမဖြစ်တယ်။
ရေမှုန်ရေမွှားတွေစုပြီး တိမ်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ တိမ်တိုက်ကလေးဟာ ဘယ်လောက်ပဲ
သူမစိတ်တွေ မှိုင်းညို့နေပါစေ အမြဲတစေ ငွေနားကွပ်ထားတတ်တယ်။ သူမမှာ
ခိုတွယ်စရာ ကောင်းကင်အစစ်တစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက် ကမ္ဘာအတုလေးထဲမှာ
တိမ်တိုက်ကလေးဟာ နေရောင်အောက်မှာဆို ပုန်းအောင်းနေတတ်တဲ့အတွက် သူမလေးကို
ဘယ်အခါမှ တိတိကျကျပုံဖော်လို့မရခဲ့ဘူး။ သူမနှစ်သက်တဲ့ ဒစ်စနီကာတွန်းထဲက
အရုပ်မကလေးတွေလို ချစ်စရာကောင်းမယ် အပြစ်ကင်းစင်မယ် ပြုံးပျော်နေမယ်လို့
ယုံကြည်ရတဲ့ အဲဒီ့တိမ်တိုက်ကလေးဟာ တစ်ခါတစ်လေ မိုးတွေရွာချတယ်။ ဥပမာ
ကမ်းနားသစ်ပင်လို မခင်နှင်းဆီလို ကဗျာမျိုးနဲ့ပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေလဲ
ပူနေတဲ့နေတွေကိုကာပြီး အေးမြမှုတွေပေးတတ်တယ်။ သူတို့လိုပျော်မိသည်
ရူးသူများမဖတ်ရတို့လို စာလေးတွေနဲ့ ပြုံးသွားအောင် တိမ်တိုက်လေးက
တတ်နိုင်တယ်လေ။ တစ်ခါတစ်လေလဲ သူလေ ပျောက်ချင်းမလှပျောက်ပြီး
အတိတ်လမ်းတွေကို ပြန်လျှောက်နေပြန်ရော။ ပုဂံခေတ် အင်းဝခေတ်ထိကို
သူမလေးက ပုန်းပုန်းနေတတ်ပေမယ့် စိတ်ကောင်းလေးဝင်ပြီးတော့
သူ့အကြောင်းတစိတ်တဒေသလေးတွေကို တိုးတိုးလေး လာပြောတတ်တာတွေလဲ ရှိသေးတယ်။
သူမခိုဝင်မှေးစက်ရာ ကောင်းကင်ကြီးကတော့ တိမ်တိုက်လေးရဲ့ စကားသံလေးတွေမှာ
မပါမပြီးပေါ့။ တိမ်တိုက်ကလေးက အရှုပ်တွေအမှိုက်တွေဆို
ဟားတိုက်ပစ်တတ်သေးတာလေ။ မိုးရွာနေသည် ယနေ့ရန်ကုန်တို့ အွန်လိုင်းပေါ်က
ညီမလေးတို့လို ပို့စ်မျိုးတွေဆို သူမရဲ့သရော်ဓာတ်က အဲ့ဒီလို။
ကိုပြူးနဲ့မပြုံးတို့လို ချစ်စရာဇာတ်ကောင်လေးတွေကို ခေါ်ခေါ်လာပြီး
မွန်တို့ကိုအပြုံးမိုးရွာချအောင် တတ်နိုင်တဲ့ တိမ်တိုက်ကလေးမို့
နောက်တစ်ခါ ကျောက်ဆောင် ပင်လယ်ကြီးဆီ မိန်းကလေးသွားတဲ့အခါ
ခေါ်သွားဖြစ်မယ့် သူမအသေးစားလေးတွေကိုလဲ ကိုပြူးနဲ့မပြုံးလို့ ချစ်စနိုး
နာမည်ပေးဖို့ မွန်က တိတ်တိတ်လေး တွေးရယ်နေခဲ့မိဖူးတယ်။
ဘာဂါလေးလို့ လာလာခေါ်ပြီး အမြဲအားပေးတွဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ
မျက်ခြေပြတ်မသွားခဲ့ဘူးဆိုတာသိတော့ သိပ်အံ့သြမိတယ်။ သူမရဲ့
ဆဌမအာရုံများလား။ သူမချစ်တဲ့ သံယောဇဉ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့နောက်မှ
ဂရုတစိုက်အကျင့်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ သူတပါးရင်ထဲအထိ
ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်တာကလဲ သူမရဲ့အရည်အချင်းပဲလေ။ တစ်ခါတစ်လေ
နားလည်ပေးနိုင်လွန်းတဲ့ မျှဝေခံစားတတ်လွန်းတဲ့ နှလုံးသားလေးကို
ထူးထူးခြားခြားသတိထားမိခဲ့တာ တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ကမ္ဘာလေးထဲမှာ
လေးမတော့စိတ်ညစ်လိုက်တာ ဆိုတဲ့အသံမျိုးလေး တစ်ခါမှမကြားခဲ့ရဘူး။
မငိုနဲ့ဘာဂါလေးရေလို့ အားပေးခဲ့ပေမယ့် သူမကိုယ်တိုင်က စိတ်ဓာတ်ကျ
ကြေကွဲအားငယ်မနေတတ်တာ သူမရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေထဲက တစ်ခုပဲလား။
လူတကာရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုခံစားရသလို ချစ်စရာ အားကျစရာ ဘဝလေးတစ်ခုကို
တည်ထောင်ထားနိုင်လိုက်တာ အင်းးး သူမနဲ့သူမရဲ့ကောင်းကင်ကြီးဟာ
မွန့်အိပ်မက်ထဲက မင်းသားမင်းသမီးတွေကို ဖြစ်လို့။ ဘာဘီနာရီလေးတေ၊ွ
အမေးအဖြေ၊ ကိုနဲ့လေးလို့ခေါ်တာတွေ၊ ကမ်းကြိုလာတဲ့လက်တစ်ဖက်ကို
ကျောင်းတုန်းကမုန့်ဝယ်ကျွေးတယ်ဆိုတာကအစ ဟိုး အိပ်မက်ထဲက
မြင်းခွါရွက်သုပ်ပန်းကန်အထိ အားကျစရာ ပီတိဖြစ်စရာကြီးတွေကို
“တစ်ခါတစ်ရံ မသိတာတွေက ပိုပြီးခံစားကြည်နူးနေစေတတ်သတဲ့
သူမဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ လက်ဆောင်လေးတစ်ခုလို
ဒါပေမယ့် ဒီလက်ဆောင်ထုပ်ကလေးနာမည်ကိုက မသိခြင်းလက်ဆောင်တဲ့“
ဂါဂါနဲ့ သူမအကြောင်း သုံးနာရီလောက်ဖုန်းပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဂါ နင်တို့တွေကို
ခင်ပေမယ့် ငါအပြင်မှာအတွေ့ချင်ဆုံး ဘလော့ဂါက မမလေးမပဲ
မွန်ပြန်ရောက်ချိန်မှာ သူမစိတ်ကူးအတိုင်း ဒီဇိုင်းဆင် ဆောက်လုပ်ထားမယ့်
သူမနဲ့ကောင်းကင်ကြီးတို့ရဲ့ ဂေဟာလေးမှာ သူမတို့ချစ်သူနှစ်ဦးနဲ့
ကြိုတင်စိတ်ကူးထားတာ) ကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့ စိတ်ကူးရှည်ရှည်တွေ
ယဉ်ခဲ့ဖူးတယ်။ တိမ်ပြာပြာတွေအောက် စကားတွေပြောကြမယ့် မောင်နှမတွေထဲမှာ
ကြွက်ဂိုဏ်းချုပ်က မပါမပြီးပါတယ်။ မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြရင်တောင်
အမည်တပ်လို့မရတဲ့ ဖြူဖြူစင်စင်ခံစားချက်လေးတစ်ခုနဲ့ သူမအကြောင်း
သူမကတော့ မွန့်ကို မသိခြင်းတွေထဲက ခိုင်မြဲမှုတွေပေးတတ်တယ်။ မရေရာခြင်းထဲက
သေချာယုံကြည်မှုတွေပေးခဲ့တယ်။ မမြင်နိုင်တဲ့ သံယောဇဉ်တွေနဲ့
ထိတွေ့ကိုင်တွယ်လို့ မရတဲ့ အားအင်တချို့ကို
မွန့်အကျင့်အတိုင်း သူမမွန့်ကိုလင့်မထားတုန်းက တော်တော်ကြာကြာ
ဆော့နေကြတုန်းက သူမနဲ့တခြားမောင်နှမတွေ မွန့်ကိုမခေါ်ပဲဆော့နေကြလို့
တယောက်ထဲစိတ်ကောက်နေဖူးတယ်။ ဦးမောင်တင့်က မွန်ရေ နင်နဲ့မလေးမကတော့
တူတူပဲ ကောမန့်ပေးလိုက်ရင်ရော တွေးလိုက်ရင်ရေးလိုက်ရင်ရော သိပ်တတ်တယ်လို့
အကြီးအကျယ်ဂုဏ်ယူနေခဲ့ဖူးတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်း ရှင်းမပြတတ်ပေမယ့် သူမဟာ မွန့်ဘဝရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုလို
သူမဘယ်တော့မှ နှုတ်ဆက်မသွားဘူးလို့ပဲ ပရမတ်တရားတွေကို ဆန့်ကျင်ပြီး ယုံကြည်နေတယ်
ဟေးး ဂါဂါ တွေ့လား ဟိုးတိမ်တိုက်ကလေးရဲ့ နောက်မှ သူမပုန်းနေတယ် ပြီးတော့
ချစ်တဲ့ ဘာဂါလေး မွန်
သို့ . . .. မွေးနေ့ရှင် မလေးမ
မမြင်ဖူးပေမယ့် အကျွမ်းတ၀င် ရှိလှတဲ့ ပုံရိပ်မှာ သနပ်ခါးပန်းရနံ့တွေ ပါတယ် . ..
မခင်နှင်းဆီ သီချင်းသံ ပါတယ် .. .
မိုးပြာရောင်ကို နှစ်သက်တတ်ပြီ . .. ရံဖန်ရံခါ ကောင်းကင်ကြီး ညိုမှိုင်းနေရင် သူမလည်း တုံ့ဆိုင်းနေတတ်တယ်။ တခါတရံမှာတော့ သူမရဲ့  စိတ်အင်အားတွေနဲ့ တိမ်ညိုညစ်များကို မောင်းထုတ်ပစ်နေပါလိမ့်မယ်။
သူငယ်ချင်းတွေကို ပျော်ရွှင်စေတတ် ခင်မင်တတ်တဲ့ စေတနာ အပြည့်ပါတဲ့ စကားလုံးတွေ သီကုံးတတ်တဲ့ မလေးမကို လေးစားအားကျမိပါတယ်။
မလေးမရဲ့ စာတွေ ဖတ်ရတာ တီးလုံးသံမြည်တဲ့ ရတနာသေတ္တာလေးကို ဖွင့်ကြည့်ရတာနဲ့ တူတယ်။
သေတ္တာထဲက ကနေတဲ့ မင်းသမီးရုပ်လေးလို Virtual World မှာ မြင်ရတဲ့ မလေးမကို ပုံဖော်ကြည့်မိတယ်။
musical box ဖွင့်လိုက်ရင် သီချင်းသံမြည်ပြီး မင်းသမီးရုပ်လေး က,နေသလို မလေးမရေးတဲ့ စာတွေကို ဖတ်လိုက်ရင် ကဗျာဆန်တဲ့ အနုပညာတစ်မျိုးကို အလိုလို ခံစားနေရတယ်။ မလေးမရဲ့ ဘလော့နဲ့ တူတဲ့ သီချင်းသေတ္တာလေးက သိပ်ကို အသက်ဝင်ပါတယ်။
မှော်ဝင်သေတ္တာထဲက နတ်သမီးနဲ့ တူတဲ့ မလေးမကို ခင်မင်ခွင့်ရတာ ဘလော့ဘ၀ရဲ့ ပျော်စရာ တစ်ခုပါပဲ။
တစ်လတည်း မွေးတဲ့ အစ်မကို ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ စရိုက်တွေကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း တွယ်တာခင်မင်မိခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း သံယောဇဉ် ကြီးတာတွေ၊ ရန်ဖြစ်ရမှာ ကြောက်တတ်တာတွေ၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို နားလည်ပေးတတ် အလျော့ပေးတတ်တာတွေကြောင့် အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ရသလို တခါတရံ နာကျင်ရတယ်။ သံယောဇဉ် ကြီးပေမယ့် တသီးတခြား အေးအေး နေတတ် တွေးနေတတ်လို့ စိမ်းကားတယ်လို့ ထင်ခံရတတ်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီရာသီဖွားတွေဟာ အလွယ်တကူ အားမလျှော့ဘဲ လုပ်စရာတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်တယ်။ ကိုယ့်ပိုင်စိတ်စွမ်းအား မြင့်သလို သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း အားပေးကြင်နာတတ်တဲ့ မလေးမ ဟာ အသက်တစ်နှစ်ပိုကြီးလာတာကိုလည်း ကြံဖန်ဂုဏ်ယူပြီး ပျော်နေဦးမှာပါ။
ပျော်စရာ ရှာကြံတွေးပြီး ပျော်အောင်နေတတ်တဲ့ မလေးမ မွေးနေ့ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ တကယ်တော့ မွေးနေ့ တစ်ရက်ထဲ မဟုတ်ပဲ နေ့တိုင်း မွေးနေ့ရှင်တစ်ယောက်လို ပျော်ရွှင်နေစေချင်ပါတယ်။ မလေးမ စိတ်ညစ်တာတွေလည်း ရှိရင် ပေါ့ပါးသွားအောင် ရင်ဖွင့်ပြီး ဘလော့မောင်နှမတွေကို ဆက်လက်လမ်းပြနိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ချစ်ခင်ရသော မလေးမ ဆက်ရေးမယ့် စာတွေကို
သူတို့ တွေဆိုတာ … Happy Birthday! ပါ အစ်မရေ. မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်များစွာတိုင် ချစ်သောသူနဲ့ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်၊ အောင်အောင်မြင်မြင်၊ အားလုံး ပြည့်စုံချမ်းမြေ့ပြီး ခရီးသွားနိုင်ပါစေ
12 Jan 09, 16:26
ဖြိုးငယ်: Happy BD ပါ အမ .. ပျော်ရွှင်ပါစေ
12 Jan 09, 15:11
JulyDream: Happy birthday to you, sister!
12 Jan 09, 13:56
sin dan lar: Happy Birthday to u,
12 Jan 09, 12:30
အိမ့်ချမ်းမြေ့: လေးမ… ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။
12 Jan 09, 11:23
SoeMoe: Happy Birthday MAMA..
ပုံရိပ်: မလေးမရေ ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ။
12 Jan 09, 09:42
မောင်မျိုး: ကိုညိမ်းညို ။ကိုတင့်၊ မောင်မျိုး၊ မီ နဲ့ မွန် တို့ ဘလော့တွေမှာ မလေးအတွက် အမှတ်တရပို့စ်များတင်ထားကြောင်းး မုန့်ဟင်းခါးချက်ကျွေးနော့် ။
12 Jan 09, 09:38
မိ: ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့နှင့်အတူ ပျော်စရာတွေ တပုံတပင်ကြီး နင့်အနားကို ရောက်လာပါစေဟာ နင့်ကို လွမ်းနေတယ် မိ
12 Jan 09, 08:07
သားကြွက်: : Happy Birthday !!!
12 Jan 09, 05:20
THS: Happy Birthday !!!!
စုံတွဲလာ ဆုတောင်းတဲ့ သူတွေကလည်း ရှိသေး…
mtj: စုန်းမလေးနဲ့ တူတူလာဆုတောင်းပေးပါတယ်
12 Jan 09, 17:06
mtj: THS ဘလော့ဂ်မှာ ကောမန့်ပေးထားတယ် လေးမရေ… ပျော်ရွှင်ပါစေ
စုန်းမလေး: ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ချစ်မ…အမြဲသတိတယရှိနေပါတယ်.. ချစ်မ အမြဲပျော်ရွှင်ဖို့ ဆုတောင်းတယ်နော်…
ဝေလေး: မမရေ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွင်ပါစေနော်. နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ချစ်သောမိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားနိုင်ပါစေကြောင်း
ကြေးအိုး: ချစ်မမွေးနေ့မှာ ဘလော့ဝင်မရဖစ်နေလို့ အီးကဒ်လေးပို့လိုက်တယ် ရလား
၀ှိုက်: မလေးမ မွေးနေ့လား Happy Birthday ပါနော် မွေးနေ့ကပြီးပြီထင်နေတာ အဲ့ဒါကြောင့် ပြန်လာဆုတောင်ပေးတာ ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်
13 Jan 09, 16:40
ကြွက်မီ: Happy Birthday to you!!!
အပြုံးပန်း: အွန်လိုင်းနဲ့ ရှစ်ရက်လောက် အဆက်ပြတ်သွားလို့ အခုမှပဲ လေးမရဲ့ စာတွေ ကမန်းကတန်း လာဖတ်ရတော့တယ်။ သုံးဆယ်ထဲကိုရောက်ပြီပေါ့။ ရာဇ၀င်ကောင်းတွေ များများချန်ထားနိုင်ပါစေ။
မှော်ဆရာ၊ ဖြိုးငယ် ၊ ကိုဂျူလိုင်၊ ပုံရိပ်၊ မလေး၊ စိုးမိုးလေး၊ မောင်မျိုး၊ ဘိုတင့် ၊ ဘိုညိမ်း၊ မစန်ဒါ၊ စုန်းမလေးနှင့် ကိုကို ၊ ဝေလေး ၊ ကြေးအိုးလေး.၊ ၀ှိုက်၊ မမ အပြုံးပန်း၊ မီ၊ မပန်ဒိုရာ ၊ ဝေလေး ၊ကိုလင်းဒီပ၊ ဘိုတင့်၊အစ်မ မနုစံ.. အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ အဝေးကနေ ဖုန်းဆက် ဆုတောင်းပေးတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်း မိ.. နဲ့အဝေးက ကဒ် ၆ ခု ပို့ ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း.. အားလုံးကို အမှတ်တရ သိမ်းရင်း ပို့ စ်အဖြစ်တင်လိုက်ပါတယ်…။
နောက်ထပ် ဘာရသေးလဲ.. ဟုတ်လား.. ရှင်… ကောင်းကင်ကြီး ဆီကလား… သိချင်လို့ လား… ဘာမှမတောင်းပါဘူး… ဟင့်အင်း.. ဘာမှ မရပါဘူး .. အော်… မယုံဘူးလား… တကယ်… အင်း.. မောင်မျိုး.. ရေးထားလို့သတိရသွားပြီး.. ဟိုလေ..ဟို… အင်း ၂၉ ခါ .. ဖြတ်… ( မီးပျက်သွားပြီ ) … :P။ ။
« 2008 နောက်ဆုံးည လှူရန် »
MhawSayar, on January 13, 2009 at 3:32 pm said:
အစ်မရေ. အစ်မရဲ့ Virtual World ထဲမှာတင် မွေးနေ့ပွဲက ပျော်စရာကြီးပဲဗျာ..
နောက်ထပ်၊ နောက်ထပ် ဆက်၍ ဆက်၍ ပျော်ရွင်၊ အောင်မြင်၊ သာယာ၊ ချမ်းမြေ့ခြင်း များစွာကို ကိုကောင်းကင်ကြီးနဲ့ အတူ ရယူပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေကြောင်း ရင်ထဲက စကားလုံးတွေကို Rendering လုပ်ပြီး Layma’s Virtual World ထဲအရောက် Comment မှ တစ်ဆင့် မွေးနေ့လက်ဆောင် အဖြစ် ထုပ်ပိုး ပို့ဆောင် လိုက်ပါကြောင်း 😀
ShwunMi_ရွှန်းမီ, on January 13, 2009 at 4:44 pm said:
မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေ ပြည့်ပါစေ 🙂
သားကြွက်, on January 13, 2009 at 5:19 pm said:
လူလည်ကျ ပြန်ပြီး သူနည်းနည်းပဲရေးပြီးတော့ သူများရေးထားတာတွေနဲ့ ။ ဒီလိုလေမုန့်ပဲ ကျွေးတော့ လေလည်ပြီး လူကြားထဲဒွတ်ခရောက်မှာပေါ့
“ဗွမ်း ” အယ် ပြောရင်း ဆိုရင်း ပေါက်ကုန်ပြီး အဲ့တာ တီကြွက် ကြောင့် ပြန်ပြီး ဆေးသောက်အုံးမှ 😛
အယ် အာဘွား တကယ်တောင်းနေတယ် လူပျိုးလေး ရှက်တယ် အဟိ မျက်စိပိတ်ထားတယ်နော် 😀
မွန်, on January 13, 2009 at 7:14 pm said:
မမကျေနပ်ရင် မွန်တို့ ဝမ်းသာပါတယ်
အဲ ဒူးချင်းတိုက်ရတာ ဒူးတွေနာတယ်မမ ဟီးး
ပန်ဒိုရာ, on January 13, 2009 at 8:57 pm said:
ကမ္ဘာတိုင်းမှာ ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် အမြဲ ပျော်ရွှင်နေပါစေ လေးမရေ.
ဝေလေး, on January 13, 2009 at 9:03 pm said:
မမမှာရှိတယ်ဆိုလို့ ဘာများရှိလည်းလာချောင်းတာ…. ဟီး ဟီး… 😛
nu-san, on January 13, 2009 at 9:18 pm said:
Happy Birthday ညီမလေးရေ.. မွေးနေ့ပွဲက ပျော်စရာကြီးနော်.. 🙂
လေးမရဲ့ မွေးနေ့မှာ.. ကောင်းကင်ကြီးနဲ့အတူ… “ဟိုလေ..ဟို… အင်း ၂၉ ခါ .. ဖြတ်… ( မီးပျက်သွားပြီ ) … ” 😀 ။
THS, on January 13, 2009 at 9:39 pm said:
ကြွက်ကလေး သောင်းကျန်းနေပါတယ် 🙂
မွန် ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ အစ်မ ၊ ပျော်ရွှင်ပါစေ 🙂
mtj, on January 13, 2009 at 10:28 pm said:
ဟာ.. ဒီမီးကလဲ အချိန်မှန်ပဲ 🙂
နောက်ထပ် ဆုတောင်းပေးပါတယ် လေးမရေ…….
မွေးနေ့မင်္ဂလာမှသည် အသက်ထက်ဆုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ 🙂
ခေါင်ခေါင်, on January 14, 2009 at 12:26 pm said:
မလေးမ.. မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ..
မွေးနေ့တော့ ကျော်သွားပြီ ထင်တယ်..
sin dan lar, on January 14, 2009 at 1:02 pm said:
ထပ်ဆုတောင်းဦးမယ်.. မရဘူး.. စိတ်ကြီးတယ်….Happy Birthday to u, :g
အဇ္ဈတ္တပြခန်း, on January 14, 2009 at 11:32 pm said:
လောက၀န်းကျင်ရွာမှာ သောကတွေနဲ့ဝေးလို့.. ထာဝရဖြစ်တည်မယ့်အနာဂတ်မှာ.. တစ်ဘ၀စာ သာယာပါစေသားဗျာ…
ပုံရိပ်, on January 15, 2009 at 8:41 am said:
အဟား ကောင်းခန်းရောက်မှ မီးပြတ်သွားတယ်ပေါ့။
SoeMoe, on January 16, 2009 at 5:20 am said:
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ များစွာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ..မမ..ရေ..ချစ်တဲ့ သူနဲ့ အတူနော်
မိ, on January 17, 2009 at 9:36 am said:
နင်တယ်ရင်းအသစ်တွေနဲ့ ပျော်နေတာ မြင်ရတော့ ငါစိတ်ချမ်းသာတယ် နင်ပျော်ရွှင်နေပါစေဟယ် >>>>>> မိ
မင်းကျန်စစ်, on January 27, 2009 at 2:40 pm said:
ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက် အမလေးမရေ နောက်ကျနေတော့ အားတောင်ငယ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဇွတ်တိုးပြီး ဆုတော့ တောင်းပေးအုံးမှာပဲ။ သာယာပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာအစစ်လေးထဲမှာ ကောင်းကင်ကြီးရယ် တားတားမီးမီးတွေရယ်နဲ့ အသက်တစ်ရာမကနေရပါစေဗျာ။